Indlela yokwenza i-testosterone enanthate homebrew kwiimpawu ze-6
/Blog/Ithala/Indlela yokwenza i-testosterone enanthate homebrew kwiimpawu ze-6
ezaposwa ngomhla 06 / 17 / 2022 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Yonke into malunga ne-testosterone enanthate powder
1. Yintoni i-testosterone enanthate
2. I-Testosterone enanthate yenza ntoni emzimbeni wakho
3. Indlela yokwenza i-Testosterone Enanthate homebrew inyathelo ngesinyathelo
4. I-Testosterone Inanthate homebrew inyathelo ngesinyathelo
5. Qala i-steroids homebrew yakho evela kwi-Testosterone
Eli nqaku linika ingcaciso ecacileyo malunga nendlela onokwenza ngayo i-testosterone enanthate homebrew. Kwakhona kukhanyisa kwiinzuzo ze-Testosterone Enanthate.
Yintoni testosterone enanthate
Ngokukhawuleka komzimba ngokugqithiseleyo, abantu bahlala bekhangele into engabancedisa ukuba bafumane inzuzo ngakumbi kunabanye. Umzekelo wesongezelelo esinjalo yi-testosterone enanthate enye yeyona nto isetyenziswa kakhulu kwi-testosterone steroids. Yonke i-androgen kwaye Anabolic steroids.
Nangona ivinjelwe ukusetyenziswa, iyaqhubeka ibe enye yezona zinto zifunwa kakhulu kwi-steroid ngabazicaka umzimba. Akuncedi kuphela kubacebisi bemizimba kodwa kuyanceda abo bawusebenzisa ngokuzonyango kwi-testosterone unyango oluthathekayo, kulabo baxhaswa ngokwesini kunye nokunyangwa kwe-hypogonadism.
I-Testosterone enanthate yenza ntoni emzimbeni wakho
I-Testosterone Enanthate ibonakalise ukuba luncedo ekulungiseni izicubu ezivelisa ngokukhawuleza komzimba. Ngokunyusa umkhiqizo weprotheni, inceda izicubu ziphume ngokukhawuleza nangemva kokusebenza kanzima kwindawo yokuzivocavoca. Ngenxa yoko, unokusebenza nzima kwaye ubone umphumo womsebenzi wakho.
Ukunciphisa amafutha omzimba
Ngelixa abantu abaninzi banokuvakalelwa ukuba bahlala banele ngokwaneleyo, bengadli kakhulu kwaye bangalahlekelwa yinqwelo yomzimba abafuna ukuyilahleka, Testosterone Enanthate uye wangqina ukuba uyayenza ngokufanelekileyo. Into emangalisa kukuba ukuba ungumyili womzimba, awuyi kulahlekelwa yimisipha yakho kodwa i-fat ebonakalayo eyazifihlayo.
Oko kuthetha ukuthini ukuba ugcine ukugcina izihlunu zakho, kwaye mhlawumbi zifumane ngakumbi zichazwe ngakumbi. Amanqatha omzimba omncinci aya kukwenza uhlale umlo kwaye uphile ubomi obude.
Ukwanda kobunzima besisu
Ukuba uyisakhiwo se-muscle, uya kuqonda ukuba i-testosterone enanthate Umzimba wokwakha umzimba uphelele. Inceda enye inqwaba ngokunyusa imveliso yeselom ebomvu kwintsi. I-testosterone enanthate ikhusela umphumo we-cortisol, i-hormone esebenza ngokubamba isisipha ngenxa yoko iholele ekulahlekelweni kwayo.
Ukuphakamisa izisindo ezinkulu, kufuneka uphumelele amandla amaninzi. Esinye sezizathu ezininzi ezenza izixhobo zomzimba ziza kwenza nantoni na ukuphucula amandla abo kuba zidibaniswa neenzuzo ezinkulu kwiimisipha zomzimba. I-testosterone enanthate enye ye-steroids ephezulu kakhulu eya kukunceda ukwakhiwa kwamandla angakumbi ukuze ukwazi ukuphakamisa ubunzima obusoloko ufuna.
Indlela yokwenza i-Testosterone Enanthate homebrew inyathelo ngesinyathelo
Ukwenza eyakho homebrew Testosterone Inanthate inokuba yinto elula okanye eyinkimbinkimbi, indlela oyikhetha ngayo. Uninzi lwabantu lunokukuphazamisa uninzi lwezesayensi kuwo, kodwa siya kukubonisa ngokulula. Nazi i imfuno kunye nesinyathelo esinqatyisiweyo sendlela onokuyenza ngayo i-Testosterone Enanthate;
I-Testosterone Inanthate powder: i-62.5 gram
I-Testosterone Inanthate: 250mg nge ml
I-Benzyl yotywala (BA): 5ml (2%)
Ioli ephuyiweyo: 148.13ml
Iisethi ezilishumi zinezikhumba nganye ezine-10 ml (Isethi yonke ifanele iqulethe i-cap, i-rubber stop, kunye ne-vial.)
I-20mL / 60 ml isirinji esinesaliti ye-18-21.
I-3mL isirinji kunye nenaliti ye-18-21 yokulinganisa
I-Glass Rod kunye ne-100mL Beaker
Amancinci amancinci amaphepha
Isilinganisi sedijithali (+ -0.1 okanye i-0.01)
I-Testosterone Inanthate homebrew inyathelo ngesinyathelo
Isinyathelo 1: Gqiba i-testosterone enanthate powder.
Inyathelo 2: Yongeza i-powder, i-BA, ne-BB kwi-beaker
Inyathelo le-3: Hlaba ibhobho kwindawo yokuhlambela ngamanzi
Inyathelo 4: Yongeza ioli
Inyathelo 5: Ukucoca
Inyathelo le-6: Bafake izibopho ngeenqwelo
Nazi iindlela ezinokuthi zenziwe njani;
( 3 4 5 )↗
Isinyathelo 1: Gqiba i-testosterone enanthate powder
Ukulinganisa I-Testosterone Inanthate powder ukuqinisekisa ukuba usebenzisa ubuninzi obufunekayo ukuze wenze i-homebrew yakho. Ukufumana ubunzima obuchanekileyo, fumana iphepha elincinane lephepha uze ulibeke kwisikali.
Ukuqinisekisa ukuba awubandakanyi ubunzima bephepha xa ulinganisa i powder, cindezela u-tare ukusetha i-scale kwi-zero. Ngoku ungongeza i powder ngokukhawuleza ukuze ugweme ukubeka okungakumbi okufuneka uqhubeke ukukususa.
Ngamanye amaxesha i powder ingaba bunzima kangangokuba ungadinga ukuyibuyisela kwakhona rhoqo xa ufuna ukudibanisa. Indlela engcono kakhulu yokukrhaqha yinto ngokufaka i-powder encinci uze ucinezele kwizinga ngokusebenzisa umnwe uze uvumele inamba ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ihlawule. Xa uqinisekile ukuba ulinganise iigrama zakho ze-25 ngokuchanekileyo, ngoku ulungile ukuhamba. Gqiba i-powtoti ye-Testosterone Enanthate ukuze uqinisekise ukuba usebenzisa ubuninzi obufunekayo ukuba wenze i-homebrew yakho
Beka i-powder yokulinganisa kwi-beaker.
Yongeza 2ml ye-Benzyl Utywala kunye ne-2ml Benzyl Benzoate.
Umsebenzi oyintloko wokongeza i-Benzyl Alcohol kukusebenza njenge-agent agent. Ikwasebenza ngokunjalo ne-solvent ngokugcina onke amafutha kunye nama-powders endaweni enye. I-Benzyl Utywala nayo iyisisombululo esisetyenziswa kakhulu, kwaye inzuzo ezayo nayo kukuba kukunceda ukuba ube nejozi elingenabuhlungu.
Eli nyathelo likhethiweyo, kodwa ukuba ufuna ukuba inkqubo iqhube kakuhle, ke akufanele uyenqabe. Fumana ibhokhwe uze uyizalise nge-intshi yamanzi. Yibeke kwindawo yokushisa, umzekelo, isitofu uze uyitshise.
Thatha ipani uze ufake i-beaker kuyo. Beka ipenethi ibe ngamasentimitha ambalwa wamanzi. Gcina iliso kwi powder kwaye ubukele njengoko lichithwa de lifike lisondele. Isisombululo esicacileyo sithetha ukuba umxube uncibilikile.
Konke oku kuncedisa ekupheliseni i powder ngokupheleleyo kwiisombululo. Hambisa kwisinyathelo esilandelayo xa kungekho powder ibonakala.
Lindela i-concoction ukuba ipholise phantsi encinane uze ungeze ioli efakwe kuyo. Unokuwufudumala kancane ukuze wenze ukuhlunga kulula.
Ioli yembewu yamagilebhisi ngumama wazo onke amafutha asenza njengabathwali. Yintoni eyenza kube ngcono ukusetyenziswa kunabanye kukuba yincinci kwaye inempahla ye-anesthetics. Kwakhona, kunceda ukulungisa izicubu ezonakalisiweyo kwaye uhlawule yonke into enempilo kuwe! Akunakwenzeka ukuba uhlupheke ngenxa yeempembelelo ezibangelwa yimbewu yeoli yevini.
Inyathelo elilandelayo ekufuneka ulithathe kukuzoba isisombululo kwisirinji oya kuyisebenzisa ukuhluza ngayo. Ungasebenzisa isirinji enye enkulu okanye encinci kwaye ukhethe ukuphinda inkqubo kaninzi.
Unwrap isihlunu se-0.22um yesirinji kwiphakheji yayo uze ulungise isaliti eluhlaza kwinqanaba elincinci kwaye usetyenzise kwisirinji. Ukusebenzisa i-swab yotywala, susela phezulu kwintsimbi engummiselo uze ufake inaliti eluhlaza kuyo. Beka inaliti enamathele kwisihlungi sesirinji kwi-vial.
Eli nyathelo liyinyathelo elibaluleke kakhulu, kwaye zonke ii-steroids ezigqityiweyo kufuneka zihambe. Kuqhelekile ukuba isihlunu sinokuvalwa ngexesha lokucoca. Ngenxa yoko, uya kuphawula ukuba inkqubo ihamba ngokukhawuleza. Ukukhawulela oku, faka indawo yokucoca ngefayile entsha ukuze ugcine intlungu yokuba kufuneka ulinde.
Kodwa ke, kufuneka uqaphele ukuba ixesha elithathiweyo lokucoca isisombululo lixhomekeke kwi-steroid kunye ne-mg / ml yemveliso. Wakuba ugqibile ukuhluza kwivial oyinyumba, inkqubo igqityiwe.
( 6 7 8 )↗
Gcoba isisombululo sakho usebenzisa iiflip-off caps.
Qala i-steroids homebrew yakho evela kwi-Testosterone
testosterone homebrew steroid Yona nto ingcono kakhulu ongaqala ngayo kuba umzimba wakho uyazi kakuhle. Iveliswa emzimbeni ngokwemvelo kwaye inokunceda ukuba ikhule, ilungise kwaye iphumelele.
Xa amanqanaba e testosterone aphantsi, kukho ukunyuka kwamafutha kunye nobunzima. Ukongezwa kweTesttosterone yindlela efanelekileyo kakhulu yokuphumeza ukusebenza kwezemidlalo, ukunyamezela ngakumbi, kunye neengcambu ezinamandla. Ukuba uceba ukuvuselela umzimba wakho, kufuneka uqikelele ukwenza i-homebrew steroid yakho usebenzisa i-Testosterone.
Umba ozayo wokwenza i-homebrewed steroid yakho kukuba awuyikuthemba ukuba iya kukunika iziphumo ozifanele. Nangona emva kokulandela iresiphi efanelekileyo, uya kufumana ukuba awuqinisekanga kakhulu into oyenzayo. Abantu abaninzi abavelisa i-steroid yabo basebenzisa njengendlela yokulinga kunye nephutha.
Ukuba awunayo izakhono zelabhorati ezaneleyo, ngoko akufanele uzingenise kule nkqubo kuba ingaba yingozi kuwe. Njengoko kuboniswe kwinqaku ufunayo kuphela izixhobo zesebhoratri ezisisiseko kodwa ulahlekelwa isinyathelo esincinci singaphetha kukunika imiba enzulu kakhulu ukusuka kwinkqubo yokujova. Kungenxa yokuba ukulungiselela i-homebrew steroid kufuneka ibe yinyumba phambi kokuba uyijobe. Kuthetha ukuba kufuneka uqaphele xa ulungiselela. Ukungabi neliso elinomdla kunokukwenza ukuba uzilimaze xa uzama ukuvelisa into onokuyithenga ngayo.
Ukuba nethemba lokuba uthatha ilungelo le-Testosterone Enanthate nesilinganiso kunye nomgangatho, kufuneka uqikelele ukutshala imali kwi-steroid esele iveliswe. Akuyi kuphepha kuphela kuphela kodwa kukhululekile ukusetyenziswa.
Ukuvelisa i-homebrew steroids yakho inzuzo kuba kunceda ekufezekiseni iimfuno zakho ezifanelekileyo kwimigangatho yokuzivocavoca ngaphandle kokuba ufanele ucinge ngokujulile kwiipokotshi zakho. Ingakhombisa kwakhona enye indlela engcono kwi-steroid esemgangathweni enokubanika ababoneleli ngeemarike. Ngendlela ephezulu yeTesttosterone homebrew ehlinzekwe ngasentla, unako ukuvelisa umveliso ophezulu.
( 9 10 11 )↗
I-Anabolic Steroids kwaye Yenza, Uprofesa Frank, iphepha 1-42
I-Testosterone: I-Action-Defence-Substitution, Eberhard Njeschlag, uHermann M. Behre, iphepha 330-339
TTFB; I-Testosterone, iyonke, i-Bio, ikhululekile, S. Septemba 19, 2017
I-AASraw ngumvelisi oqeqeshiweyo we-testosterone enanthate powder ene-lab ezimeleyo kunye nefektri enkulu njengenkxaso, yonke imveliso iya kwenziwa phantsi kolawulo lweCGMP kunye nenkqubo yokulawula umgangatho olandelwayo. Inkqubo yokubonelela izinzile, zombini ii-odolo zokuthengisa kunye ne-wholesale ziyamkeleka.Wamkelekile ukuba ufunde ulwazi olungakumbi malunga ne-AASraw!
I-Nootropic Coluracetam: Ungasebenza njani kuBongo kunye nokunyanga unxunguphalo	I-10 edume kakhulu kwi-Anabolic Steroids Raws Material